Types of polyester filament yarn - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Roba kpuchie yarn
Detuo Nylon Yarn
Types of polyester filament yarn
Polyester bụ otu n'ime akụrụngwa sịntetik kachasị mkpa ma bụrụkwa aha nnweta nke polyester fiber na China.Ọ bụ acid (PTA) ma ọ bụ acid citethyl eeth (DMT) na ethylene glycol (MEG) dika ngwa, site na mkpocha ma ọ bụ transesterification na mmeghachi nke oghere nke nkwadebe nke fiber high polymer - polyethylene terephthalate (PET), emere site na eriri site na ogho na post-post.Polyester filament, bụ ogologo karịa ihe karịrị otu kilomita silk, filament na-efegharị n'ime otu.A na-enweta ụdị nrụpụta dị iche iche, A na-ekekarị friji polyester ụzọ atọ: raw filament, gbasaa filament na filatedured.
Na mmalite nke silk raw
K silk nke izizi na-ezo aka na silk spun site na gbazee ozugbo na-agbatịghị agbatị, nke kewara na UDY, MOYI, POY na HOY dị ka ogwe ọsọ.
1.Fọtstas a na-ejikọtaghị (UDY) : ụmụ irighiri eriri ya enweghị nhazi na enweghị akwara, ya mere ụdị silk a nwere ike dị ala, nnukwu elongation na nkwụsi ike nke akụkụ adịghị mma, na n’ozuzu enweghị ike itinye ya n’ọrụ.
2. Igwe na-eme ka akụkụ nke ọkara (MOYI) : ụmụ irighiri eriri ya nwere ntakịrị nghazi, na ogo nghazi dị elu karịa UDY na ala karịa filament pre-based based. Ọdịdị nke filamentị a abụghị nke kwụsiri ike ka etinyere ya aka.
3. Ekwenti izizi (POY) : eriri ya agbatịala nke ọma, ya na nghaghari ya na obere grains, mana ọ ka dị ala karịa ihe achọrọ waya, nke adịkarịghị adabara maka ịhazi akwa ozugbo. Otú ọ dị, Enwere ike iji silk ndị mejupụtara ya mepụta ya na eriri ndị ọzọ iji gboo mkpa ikpa, nke mere na akwa ahụ nwere ụdị pụrụ iche.
4. Yiri mgbago nke di elu (OWO) : a na-akwadebe ya site na iji otu n ’elu-ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, na nghazi di elu nke iyuuru ahihia na irughari ya nke oma, mana nnukwu elongation na okpomoku ikuku, nke na - enweghị ike imeju ihe niile achọrọ maka ojiji.
Stretch silk na-ezo aka na eriri a na-enweta site na ịgbatị eriri ahụ na-aga n'ihu n'usoro. Dabere na mgbatị dị iche, enwere ike kee ya na silk gbasara (DY) na siliki agbatịwo nke ọma (FDY).
1. Silk agbatị (DY) : ọ na-ezo aka na silk mere site na iji mgbatị ọsọ dị ala na ntaneti. Mkpu ya dị 40%.
2. Yinka na-adọta nke ọma (FDY) : ọ na-ezo aka na yarn ahụ mepụtara site na ịkụghari na ịbịaru usoro-otu. Qualitydị nke yarn a kwụsiri ike, na ntutu isi ole na ole, gbajiri agbaji na ezigbo ịdị ọcha na-eme ka ihe dị mma na ngwaahịa.Its nwere ngwaahịa dịgasị iche iche nke USES na nnukwu ahịa ahịa, nke bụ otu n’ime akụrụngwa eji eji akwa akwa na akwa akwa na China.
N'okpuru omume nke ndị agha na-arụ ọrụ na ikuku, A na-agbanye eriri ndị kwụ ọtọ na-agbanwe agbanwe, na-akpọ filaments, ma ọ bụ ederede akụrụngwa. Enwere ike ekewa waya izizi ederede (TY), tensile ederede waya (DTY) na waya ikuku (EGO).
1. Yarn yarn (TY) : A na-eme ya site na usoro nke usoro atọ nke ịgbado ikuku -- na-agbatị -- ntụpọ gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ site na nhazi nke ịgba elu-ọsọ -- ugha ala ugha ugha, nke nwere ụfọdụ ịdọ aka na adịghị ama, na ezigbo nguzosi ike.
2. N'ịdọ akwa yarn (DTY) : izugbe, A na-eji POY eme ihe dị ka akụrụngwa na obere yarn na-agbanwe site na ịgbatị na imebi otu usoro. O nwere ikike ụfọdụ ma adị nro karịa TY, mana ogo ya kwụsiri ike ma sie ike ịkwado ya.
3. Yarn ikuku ederede (EGO) : Ọ na-ezo aka na nhazi nke obe na-ebugharị ngwakọta site na teknụzụ ụgbọelu iji mepụta eriri na-adịghị agafe agafe, ya mere na akwa ahụ nwere ngw, enwere ike iji POY meputa ngwaahịa dika ihe akụrụngwa. A na-ejikwa ngwaahịa ndị emechara emezi iji na-emepụta akwa akwa ụlọ.
Varietydị dịgasị iche iche nke eriri polyester fiber gụnyere eriri dị iche, arụ ọrụ bara uru na eriri eji arụ ọrụ. N’oge na-adịbeghị anya, site na mmepe nke teknụzụ siliki, polyester monofilament anọwo na-etolite na-enwe ezi eriri, ma nwee ike mepụta fiber nke ultra-ọma na njupụta nke 0.00011dtex.
Isi mmalite: kemikal ahịrị na - eme kemịkal, ngwongwo akọrọ.
Mpempe mmiri na mmiri na-adọrọ adọrọ, ị pụrụ n'ezie ịmata ọdịiche dị n'etiti ha?
Polyester filament na staple
Copyright © 2019 Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ikikere ikike.